XOG CUSUB: Anjabigii Al-Shabaab ka soo goostay ‘Zubair Al-Muhajir’ oo wareysi sir badan ku bixiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Anjabigii Al-Shabaab ka soo goostay ‘Zubair Al-Muhajir’ oo wareysi sir...
XOG CUSUB: Anjabigii Al-Shabaab ka soo goostay ‘Zubair Al-Muhajir’ oo wareysi sir badan ku bixiyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Zubair Al Muhajir oo ka mid ahaa Saraakiisha Ajaaniibta ee ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa waxaa uu bixiyay wareysigii ugu horeeyay, isagoona kaga hadlay sida uu dalka ku yimid, qaabka uu Shabaabka uga soo goystay, waxa ku kalifay iyo farriin uu bulshada la wadaagay.
Ka hor inta aanu bixin wareysigan oo uu siiyay VOA ayaa waxaa maalin ka hor barraha bulshada la soo geliyay muuqaal uu soo duubay Zubair Al Muhajir, taasoo uu ku cadeeyay inuu isaga baxay Al Shabaab, iyadoona uu dhalleeceen ugu jeediyay Hoggaanka Al Shabaab.
Zubair Al Muhajir oo ka mid ahaa Saraakiisha Ajaaniibta ugu sareysa ee Al Shabaab la joogta ayaa sheegay in uu Somaliya yimid sanadkii 2006-dii, xilligii Midowga Maxkamadaha Islaamiga.
Ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Ivory Coast ayaa burburkii Maxkamadaha ka dib ku biiray Ururka Al Shabaab, waxaana uu ka soo mid noqday Golaha Shuurada ee Ururka Al Shabaab.
Zubair Al Muhajir ayaa wareysiga ku sheegay sanadkii 2013 inuu isaga baxay Ururka Al Shabaab, balse deegaanada uu ururkaasi maamulo uu isaga soo tagey bishii October sanadkii 2019.
Su’aal ahayd waxa ku khasbay inuu isaga soo baxo Al Shabaab ayaa sheegay inay sababuhu badan yihiin, ayna ka mid yihiin inaanay cadaalad wax ku xukumin, hoggaankooduna aysan ku dhaqmin Shareecada Islaamka.
“Sababaha igu kalifay way badan yihiin, waxaa ka mid ah inaysan cadaalad wax ku xukumeynin, inay umadaha Muslimiinta ah gaaleysiinayaan iyo qof kasta oo xiriir la leh, inaysan hoggaankooda isku dhaqin Shareecada, inay dhiigga Muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan iyo inay dadka danyarta ah canshuur uga qaadaan magaca Zako.”
Mar la weydiiyay goorta uu ogaaday inay qaab guracan u shaqeeyan maleeshiyada Al Shabaab ayaa wuxuu yiri “Inay khaldan yihiin waxaan ogaaday 2009, qaraxii Hotel Shaamow ka dib.”
Qaraxii Shaamow miyaad weydiisay Madaxda Al Shabaab, maxayse ka yiraahdeen oo la weydiiyay ayaa wuxuu yiri “Haa waan weydiiyay Abuu Zubeyr/Ina Godane, markuu joogay, wuxuu iigu jawaabay hadalkii uu hadda Cali Dheere sheegay, taas ayuu iigu jawaabay ma fahamtay? Anigana waxaan ogaaday inuu khaldan yahay.”
Mar la weydiiyay waxa uu jeclaan lahaa inuu dadka uga sheego waxaysan ka ogayn Al Shabaab ayaa carab dhabay inuu dadka ogeysiinayo inaanu ujeedku Shabaab ahayn ku dhaqanka Shareecada Islaamka, balse ay dadka khaldayaan.
“Dadka waxaan ogeysiinaynaa inaysan nimankan dantoodu ahayn Shareecada, ee ay dadka marin habaabinayaan, dano gaar ah ayayna leeyihiin nimankaas, aan Shareecada ahayn.” Ayuu yiri Sarkaalka ka soo goystay Al Shabaab.
Su’aal kale oo la weydiiyay ayaa ahayd sidee Al Shabaab looga hortaggi karaa, weeraradooduna lagu joojin karaa, waxa uu ku jawaabay “Maadaama Al Shabaab sheeganayaan in dagaalkoodu uu ku saleysan yahay Diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkoodu uu Diinta khilaafsan yahay. Laakiin waxaa la rabaa Culimo fahamsan fekerkooda oo raadin kara maraajiicda khaldan ay ka duulayaan.”
Adiga hadda qorshahaagu muxuu yahay oo la weydiiyay ayaa yiri “Aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaamiyo in dagaalkan uusan Diinta waafaqsanayn, maslaxada dantana uusan ku jirin. Arrintaasna waxaan ka diyaariyay buug, waxaan rajeynaa inaan soo bandhigo dhawaan, Insha’Allah.”
Zubair Al Muhajir oo ka jawaabayay su’aal ahayd maku laabanaysaa wadanka aad ka timid ee Ivory Coast mise waxaad sii joogeysaa Somaliya, ayaa wuxuu yiri “Ilaahay baa og, waan arkaynaa Insha’Allah.”
Su’aashii ugu dambeysay ee la weydiiyay ayaa ahayd waxa uu u jeedin lahaa Ajaaniibta ka barbar dagaalanta Al Shabaab, waxa uuna yiri “Horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira dad badan oo aaminsan in Muhaajiriinta ay Shabaab u yihiin dhibka jira, laakiin xaqiiqda saas maaha. Muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markii ay arkayn dhaqanka Al Shabaab iyo diin la’aantooda ay ka hor yimaadeen, taasaa sababtay in qaar ay dilaan, qaar musaafuriyaan, qaarna ay illaa iyo hadda xabsiyadooda buux dhaafiyeen.”
Zubair Al Muhajir oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa ku hadla luqado kala duwan, sida Faransiiska, Carabiga, Ingiriiska iyo Somaliga. Muuqaalkii uu soo duubay iyo wareysigan lala yeeshay ayuu labadaba ku jeediyay af Somali.
Sarkaalkii Anjabiga ee Al-Shabaab ka soo goystay
Sir badan bixiyay
Zubair Al Muhajir